Kumashure Nyeredzi yeVashandisi veWiricheya
Posted on December 19, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Zvinogona kuva zvinopfuura kungotarisa nyeredzi paunotarisa kumusoro. Pane zvigadzirwa zvemazuva ano kuti ikubatsire kuzadzisa zvakawanda. Iwe zvakare unokwanisa kuita izvi mu wiricheya, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune wese munhu anoda kuinakidzwa. Mhuri yese inogona kutora chikamu muchiitiko ichi mukati meyadhi yako wega. Kune materesikopu asingadaro mutengo a mari yakawanda uye iyo mitengo inogona kuchengetwa pasi pe $ 100. Zvinogona kuita kuti vana vabatikane uye kwete kungo mumba vatambe mitambo yemavhidhiyo paTV. Icho chimwe chinhu chaunogona kuita manheru ega ega kana angangoita manheru ega ega kubvira icho chokwadi chekuti iwe unoita chiitiko ichi chako kuseri kwemba. Muchikamu chino, iwe uchazoziva dzimwe nzira dzaungatanga nadzo mune yako itsva chitandadzo kana zvirinani izvozvi chinhu chitsva mhuri yekuzvivaraidza. Tichasanganisira zvinongedzo kumawebhusaiti iwe aunogona kutenga materesikopu kubva kana kuwana ruzivo rwakadzama kubva kune akakosha mapoinzi angangoda kutsanangurwazve.
Kana iwe usina chivanze kumashure ipapo iwe unogona achiri kuyedza izvi nekuti unogona kunge uine shamwari iyo ine kumashure kana iwe unogona zvakare kurova paki sezvo iri pachena. Kana iwe uine seri kweseri iwe une zvimwe zvekurudziro zvekutenga zvirinani kushanda teresikopu nekuti haufanire kugara uchizvifambisa kubva kunzvimbo uchienda location
n. Mamwe materesikopu ane maficha ari nani zviri pachena ne kuwedzera mutengo. pano muenzaniso weteresikopu ine zvimwe zvinhu. Iwe unogona kuona ese anotonhorera maficha avanazvo uye mazhinji acho iwo wenguva dzose teresikopu haizove nayo. ichi chinongedzo cheteresikopu yenguva dzose yaunogona zvakare kushandisa iyo inoshanda zvakare mukubatsira mhuri yako kuva nenguva yakanaka uye haizopwanya bhangi. Iri izano rakanaka kuseta zuva chairo kunze kwemwedzi pamwe kana svondo kuti rishanduke kuita hobho wotanga kupinda mumashure penyika nyeredzi.
Kuichinjisa kuita Chaicho Chitandadzo
Ukangotanga kuzviita nemhuri yako kazhinji uye imi vakomana munakirwe nazvo, nyeredzi yekumashure inozove chinhu chekutandarira uye haugone kuwana chakaringana zvacho. Chikamu chakanakisa nezvazvo unogona kuona kuburikidza neteresikopu kuburikidza neyako wiricheya haudi chero inoenderana inoenderana midziyo. Kana iwe uchida kuitora kuti ienderere mberi hongu saka kutenga iyo inodhura materesikopu inorega iwe kuti uibatanidze iyo kune komputa uye ichave inoona skrini. Kana iwe uchida mamwe marondedzero akazara pane kubaya he
re uye iwe uchave unokwanisa kuverenga giraidhi kuti ikubatsire iwe kutanga kana iyo inogona kukubatsira iwe kunyangwe iwe watove uri mazviri nekuti inogona kuenda munzira mbiri. Chero nzira yaunoguma unoguma wasarudza iyo zvakakosha chikamu ndechekuti unakirwe nacho uye unodzidza zvakawanda itsva zvinhu kubva mairi pamwe nemhuri yako neshamwari.
Kushushikana uye Kusanganiswa kweMimhanzi
YouTube Inobatsira Vanoshandisa Wiricheya Vashandisi